काठमाडौँ – अब जाडोको मौसम सुरु हुदै छ । यस जाडोको मौसमले बिभिन्न समस्या मध्य ओठ फुट्ने समस्या पनि हुने गर्छ ।यस बेलामा ओठको स्याहार हामिले गरिएन भने यसले धेरै समस्या निम्त्याउछ । ओठ फुटेमा दुखाइ हुनुका साथै अनुहारलाई पनि कुरुप बनाउछ । त्यस्तै आठ फुटेमा तातो कुरा खान पनि
अशोक दर्जीको भन्दा मनै लाेभ्याउने घर बन्याे भुईकटहरकाे, मंसीर १२ गते घर हस्तान्तरणको दिन आउदैछन यी ठुला हस्ती (भिडियो)
बाल गायक अशाेक दर्जी का साथी भुईकटहरकाे घर निर्माण क्रममा छ । न्युन रकममा यती राम्राे घर बन्दै छ कि त्याे सुन्दा धेरैलाई अाश्चर्यकाे विषय हुन सक्छ । भरखरै गरीएकाे कुराकानीमा निर्माण समितीका संयाेजन अध्यक्षले मंसीर १२ गते घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेकाे बताउनुभयाे । देश तथा विदेशमा छरिएर बस्नु
कतिपय समाज र आम धारणामा हस्तमैथुनलाई अनैतिक र हानिकारक मानिन्छ । तर विशेषज्ञहरु यसको ठिक उल्टो अर्थात हस्तमैथुन एक स्वस्थ यौन जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भन्छन् ।हस्तमैथुन भनेको हात वा अन्य कुनै चीजबाट यौन आनन्द प्राप्त गर्ने तरिका हो । विशेषज्ञहरु भन्छन्, ‘यो सुखको अनुभूति सँगसँगै पुरुष र महिलाको स्वास्थ्यका
कुरा द्वापरयुगको हो तर आज पनि राधा बिना कृष्णको नाम र कृष्ण बिना राधाको नाम अधुरो मनिन्छ । आज हामी एक यस्तो कहानी सुनाउदै छौ जुन सुनेर तपाई नै चकित पर्नु हुन्छ । यो पौरानिक इतिहासले वर्तमान समयलाई अति नै सुन्दर साथ जोड्ने गर्छ । यस्तो स्थान जहाँ भगवान कृष्ण
नेपाली वर्णमाला अनुसार ४ अक्षर बाट नाम सुरु हुने केटीहरु बढी पबित्र हुने कुरा बताइएको छ । यी ४ अक्षर बाट नाम सुरुहुने व्यक्तिहरु परिवारमा सबैको रोजाईमा पर्ने र समाजमा पनि आफ्नो नाम कमाउन् सक्छन । “R” बाट नाम सुरुवात हुने केटीहरु एकदम सुन्दर र भाग्यमानी हुने गर्छन । उनीहरु
भुलेरपनि यस्ता लक्षण भएका स्त्रीको पछि नलाग्नुस्ज ! जीवन बर्बाद होला !
सामान्यतया महिलाहरु पारिवारिक, सामाजिक आचरण भन्दा फरक रहेका हुन्छन् । जो न आफु राम्रो मार्गमा हिडेका हुन्छन् न अरुलाई राम्रो गर्न ने दिन्छन् । आज हामी तपाईहरुलाई यस्तै पुराणले प्रमाणित गरेको समसामयिक कुराको जानकारी दिन गइरहेका छौ । यस्ता लक्षणले स्त्रीलाइ असौभाग्यनी बनाउँछ । १.जो स्त्री फोहोरमैला बस्छन र आफ्नो
१३ दिने दाह संस्कार तीन दिनमै सकिने, मृत्यु संस्कारमा व्यापक परिवर्तन l के यो ठिक हो ? तपाइको विचार
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र जनसांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको संयुक्त तत्वाधानमा आयोजित मृत्यु संस्कार सुधारका सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा धार्मिक क्षेत्रका विद्वान्ले परिवर्तित परिवेश, सामाजिक अवस्था, धार्मिक स्थितिमा आएको परिवर्तनलाई विचार गर्दै हिन्दू धर्ममा रहेको १३ दिने मृत्यु संस्कारलाई सुधार गर्दै कम्तीमा तीन दिन र बढीमा पाँच दिनमा मृत्यु संस्कार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा
अनुहारमा देखिने कालो दागले हैरान हुनुहुन्छ भने अब समस्याको सामाधान आइसकेको छ । कालो दाग हटाउनको लागि अब धेरै तनाव लिन पर्दैन । सामान्य प्रकृया पुरा गरेको खण्डमा पनि अनुहारमा देखिएको कालो दाग सजिलै हट्न सक्छ । हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस्। यसले अनुहारलाई नरम बनाउँछ। यसले छालामा
A U.S-bound plane was forced to make an emergency landing after ‘smoke was detected in the lavatory’. The Pakistan International Airlines aircraft was en route to New York from Manchester Airport when an indicator signalled possible smoke in the toilet. As the Boeing 777 was flying over Northern Ireland, the
महिलाहरुले नहेर्दिनुहोला यो भिडियो, पुरुषले हेर्न नछुटाउनुहोला !
यस विडियो को संसार के हर पुरुष को देखना चाहिए अर्थात यस भिडियो संसारका सबै पुरुषहरुले हेर्नुपर्छ भन्ने शीर्षक दिएर टाइगर इन्डिया नामक युट्युव च्यानलबाट फेब्रुअरी २८ २०१७ मा अपलोड भएको यो भिडियो निकै नै मर्मस्पर्शी छ । ३ करोड ६२ लाख भन्दा बढी मानिसहरुले हेरिसकेको उक्त भिडीयोमा अहिलेसम्म १